Zavamaniry natolony miaraka amin'ny akoho sy ny holatra
Second courses / From Poster
Masiaka laisoa miaraka amin'ny akoho sy ny holatra - lovia roa amin'ny roa. Notsaboina avy hatrany io hena io. Tsotra, haingana sy tena matsiro. Mendrika misy latabatra amin'ny latabatra rehetra.
Androany aho dia mizara aminao fotsiny izay fomba fahitana mahavariana momba ny fomba mahandro elatra amin'ny fomba orientaly. Ity dia fomba fanao mahomby amin'ny fikarakarana antokon'olona ho namana na manompo ao
Manoro hevitra aho ny hanao pancakes avy amin'ny turkey, ny lovia dia tsy matsiro ihany, fa koa mahasalama. Alao sary an-tsaina ny fomba fanao! famaritana
Sausage soso-bidy ao anaty koba
Nozaraiko ilay sakafo ho an'ny sakafo matsada nefa matsiro! Vonona haingana ny zava-drehetra, ary ny kojakoja faran'izay kely indrindra no takiana. Koba malefaka sy matsiro ary saosisy -
Mofomamy miaraka amin'ny hena mifangaro
Ny hena miaraka amin'ny hena mifangaro dia tsy afaka hirehareha amin'ny fandrahoan-tsakafo an-tsokosoko, fa amin'ny lafiny iray, manana toetra toy ny tombony ho an'ny vatana sy ny fahafaham-po izy. Ireo no lovia
Kurze miaraka amin'ny hena
Kurze - lovia misy tsirony Dagestan. Samy hafa izy ireo amin'ny dadanay izay tsy avy amin'ny endrika ihany, fa koa amin'ny famenoana. Ny famenoana, araka ny fomba, dia mety ho endrika isan-karazany, izay hahafaly sy
Salady misy fo, karaoty sy tongolo
Mahafa-po ny salady! Noho izany, dia azo aroso tsara ho toy ny lovia tsy miankina - fo manana lovia misy legioma. Hevitra tsara ho an'ny sakafo an-trano na fisakafoanana fianakaviana. Manoro hevitra aho
1 2 ... 122 manaraka →